'IT: Cutubka Labaad' Waxaa ku jira Iconic Adrian Mellon Scene, wuxuu xaqiijinayaa Qoraa
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh 'IT: Cutubka Labaad' Waxaa ku jira Iconic Adrian Mellon Scene, wuxuu xaqiijinayaa Qoraa
by Michael Nijaar Waxaa laga yaabaa 13, 2019
Sida taageere weyn u ah sheekada Stephen King IT, si dhakhso leh ayey u caddaatay inaanay waligeen heli doonin la-qabsi aamin ah. Labadii wasaaradood ee 1990 iyo agaasime Andy Muschietti filimkiisii ​​2017 labaduba siyaabo badan ayey uga leexdeen buugga, iyo IT: Cutubka Labaad waxay umuuqataa inay isku mid qabanayso.
Markaan dhinac iska dhigo xaqiiqda ah inay jiraan waxyaabo yar oo aan jeclaan lahaa inaan arko ku habboonaanta, sababo muuqda awgood, waxaan la yimid xaqiiqda ah in la qabsiga uusan si buuxda u qabsan doonin buugga King. Si daacadnimo ah, laga yaabee taasi inay tahay tan ugu fiican, maadaama aan badanaa aqrinnay sheekadaas.
Mahadsanid cusub THR wareysi lala yeesho IT: Cutubka Labaad qoraaga Gary Dauberman in kastoo, si fudud ayaan u nasan karnaa innagoo og in ugu yaraan hal taxane astaamo kale ay sameyn doonto filimka soo socda. Dauberman wuxuu xaqiijinayaa in dilka Adrian Mellon lala qabsan doono.
Waa muuqaal caan ah oo ku jira buugga waana mid aan dooneynay inaan ku darno filimka. Waa weerarkii ugu horreeyay ee maanta ka dhaca Derry wuxuuna gogol dhig u yahay waxa Derry noqday. Waa saameynta Pennywise xitaa inta uu seexanayo, waana xumaan saafi ah waxa ku dhaca Adrian. Kuwani xoog u sheegashada ah ee ka shaqeynaya Pennywise waxay noo ahaayeen muhiim inaan soo bandhigno. ”
In yar oo aan weligood akhrin IT, Adrian Mellon wuxuu ahaa nin khaniis ah oo ay wada joogaan lammaanihiisa Don markii ay weerareen koox ka mid ah tuugada qaniisiinta ah. Mellon waxaa lagu tuuray buundo waxaana ku dhacay miyir dabool, ka dib si cabsi leh ayuu ku dhammeeyay Pennywise oo sugeysay.
Muuqaalkan gabi ahaanba waa la iska indhatiray meerisyadii 1990, inkasta oo si cadaalad ah loo arko, labadan filim marka la isku daro waxay leeyihiin qiyaastii seddex saacadood oo dheeri ah oo ah waqtiyo ay ku shaqeeyaan. Waxaan rajeyneynaa Dauberman, Muschietti, iyo shaqaaluhu inay sameeyaan tan cadaalad darrada ah ee argagaxa leh.
Waa: Cutubka 2aadStephen King waa
Blumhouse 'Ninka La Arki Karo' Reboot Ugu Dambeyntii Wuxuu Helaa Faahfaahinta Shirqoolka Qaar
Hunted, Horror-Themed Black Monarch Hotel ee Colorado wuxuu u furan yahay Ganacsi